I-Archena Spa | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Murcia, Ukuzilibazisa
Sisondela ehlobo futhi abaningi bethu bahlela amaholide. Singahamba siye phesheya noma kulo nyaka kufanele sihlale ezweni? Ngabe upenda izintaba noma ulwandle kulo nyaka? Ngabe kuzoba yiholide elide noma izinsuku ezimbalwa nje? Kuthiwani uma kulo nyaka sizame ezinye iziphethu ezishisayo? Uma sikhetha iziphethu ezishisayo, inketho enhle yiyona I-Archena Spa.
Iziphethu ezishisayo Basondelene no-Alicante noMurcia futhi bebeyindawo ethandwa kakhulu e-spa kule ngxenye yeSpain isikhathi se-loooong. Ake sazi i-Archena Spa namuhla.
1 I-Archena Spa
2 Vakashela i-Archena Spa
I-spa iseningizimu-mpumalanga yeSpain, esifundazweni saseMurcia, eduze komfula iSegura naseNatural Park yaseValle de Ricote. Lokhu Amakhilomitha angama-80 ukusuka e-Alicante futhi angama-24 kuphela avela eMurcia ukuze ubaleke uchithe izinsuku ezimbalwa emanzini ashisayo, uziphumulele.
Le spa ihlehlela emuva emlandweni ngoba iziphethu ezishisayo zindala. Kubukeka sengathi ukusetshenziswa kwamanzi ashisayo ngabahlali kwaqala emuva ngekhulu lesi-XNUMX BC, ezandleni zama-Iberia, kwase kuthi leyo ndawo yaba yingxenye yomzila wezohwebo owawusiya enhlokodolobha yaseTurdetania, eCástulo. Ngokusobala ku amaRoma Bayithande futhi banesibopho sokwakhiwa kwezipaza zokuqala ngokufanele.
Lokho kungukuthi, ngezakhiwo ezinikezelwe ngokukhethekile ukujabulisa nezindlu zangasese. Ngakho-ke, abavubukuli banamuhla bathola izinsalela zamakholomu, indawo yokushisa eshisayo, ihhotela elinezitezi ezimbili, idiphozi yamanzi okuphuza asetshenziselwa ukuwasabalalisa kamuva, lapho umnyango wawo usasebenza khona, izinsalela zamasondo wamanzi ngisho necropolis.
I-spa isasebenza futhi ngeNkathi Ephakathi yayisezandleni ze-Order of Saint John yaseJerusalema. Kusukela ngekhulu le-XNUMX laqala ukuthola udumo, khona-ke imizila iyathuthukiswa futhi ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye ukuthi lamukela isimo samanje sasemadolobheni, ejwayelekile yama-spas angaleso sikhathi, namahhotela amaningana: i-Hotel Termas, i-Hotel Madrid ne-Hotel Levante, ikhasino ...
Vakashela i-Archena Spa
Imithombo eshisayo iyafana namanzi ashisayo. Lapha amanzi yisibabule, isibabule, i-chlorine, i-sodium, ne-calcium, futhi kuvela ekushiseni kwe- 52, 50C kwentwasahlobo enkulu. Amanzi lapha ahlukile kuwo izakhiwo zamaminerali etholwe ngemuva kweminyaka eyizinkulungwane eziyi-15 ngaphansi komhlaba.
Lawa manzi ashisayo ayinto etotosa umzimba, mihle ukususa ingcindezi nokuphumula, ngaphezu kokwelapha ezinye izinhlungu ezihlangene noma ukuthambisa isikhumba. Zilungele i-rheumatism, izimo zamaphaphu nobuhlungu bethambo futhi. Ngokusobala asinakucwila emanzini angaphezu kuka-50ºC ngaphandle kokuzishisa, ngakho-ke izinga lokushisa elijwayelekile lingu-17ºC. Uma ungeza kulokhu ukuthi umhlaba omuhle onelanga onamahora acishe abe yizinkulungwane ezintathu ePhoebus esibhakabhakeni ngonyaka… kuhle lokho kuhle!
I-Archena iyinkimbinkimbi ngakho-ke into enhle kakhulu ukuthi uzohlala ehhotela langaphakathi. Zintathu ongakhetha kuzo zingu-253 sezizonke izindlu. I- Amathenda Ehhotela futhi i Ihhotela Levante yizinkanyezi ezine, kanti i Ihhotela Leon Kuyisigaba sezinkanyezi ezintathu.
I-Termas Hotel ivela ngekhulu le-68 futhi inomhlobiso we-neo-Nasrid onombhalo ofana noMthombo Wezingonyama ze-Alhambra. Inikeza i-WiFi yamahhala kuma-lounges nokufinyelela kwamahhala ku-thermal complex. Inamagumbi angama-XNUMX anendawo yokugezela ephelele, i-TV enezimpawu zomhlaba wonke ne-mini bar. Iphinde ibe negumbi lokudlela. IHotel Levante iyafana.
Ihhotela León futhi linokufinyelela okuqondile e-spa, okungukuthi, awudingi ukushiya ihhotela uye emithonjeni eshisayo. Inamagumbi ayi-117 asanda kulungiswa, ezitezi ezintathu. Ngena ngo-3 ntambama bese u-12, njengakwezinye izindawo ezimbili zokuhlala.
Inkimbinkimbi yakhiwa ngamachibi ashisayo, isifunda esishisayo kanye nezindlela zokwelashwa ezishisayo ezinikezwayo. Kunamachibi amabili amakhulu, elilodwa ngaphandle nelinye elisendlini. Ngaphakathi unezinsizakalo ze-hydro-thermal ngezindiza zamanzi, imifudlana, izimpophoma, i-jacuzzis nedamu lezingane. Kukhona futhi indawo yasolwandle, amakamelo okushintsha, ibha yokudla okulula. IThe Thermal Gallery ingumgogodla wendawo ngoba kukhona intwasahlobo neHhotela Elishisayo okuyilapho i- ukwelashwa.
Lezi zindlela zokwelashwa zinqunywa ochwepheshe bezokwelapha ku-hydrology (ulwazi lweziphethu ezishisayo zokwelapha). Ngakho-ke, kumenyu yokwelashwa esiyitholayo ama-hydromassages, izihlambi eziyindilinga, amajethi ashisayo, izindlela zokuphefumula, izitofu ezinomswakama, ukwelashwa ngodaka, ukubhucungwa okuhlukahlukene nokuzivocavoca umzimba.
Kukhona ukubhucungwa okuthile okubizwa nge-Archena massage okwenziwa ngaphansi kwezihlambi zamanzi ezishisayo nangodaka, ngokwesibonelo, ukwenza ngcono ukusakazwa kokubuyiswa kanye nokukhulula izinkontileka. Udaka lubumba oluhlanganiswe namanzi amaminerali ezingeni lokushisa elingu-45ºC. Ifakwa emajoyintini, inesenzo sokulwa nokuvuvukala kanye ne-analgesic.
Ngakolunye uhlangothi kukhona umkhakha obhapathizwe njengo Ithemuachena okuyisifunda esincane esishisayo esakhiwe ngesitofu esinomswakama, ichibi lama-37 ºC, izihlambi zokushisa ezishisayo, iqhwa namakamelo emifantu emifushane yezandla. Umphumela? Ubukeka uxhuga njengonodoli wezingubo.
Ngemuva kokuvakashela i-Archena Spa ungahamba nemikhiqizo ehlukile njengezikhumbuzo: ama-gels okugeza, amabisi omzimba, ama-shampoo akhethekile, amanzi ashisayo, amabisi okuhlanza, okhilimu abalwisana nokuguga abanama-stem cells, i-caviar serum, izikhuhla ebusweni kanye nokhilimu wesandla.
Imininingwane ewusizo mayelana neBalneario de Archena:
Amahora: NgoMsombuluko kuya ngeSonto kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-9 ntambama (ngoJanuwari kuya kuMashi 15, Novemba noDisemba); kusuka ku-10 ekuseni kuya ku-10 pm (kusuka ngoMashi 16, Ephreli, Meyi, Juni, Septhemba nango-Okthoba); kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-12 ntambama (ngoJulayi nango-Agasti) nangoDisemba 24 no-31 kusuka ngo-10 ekuseni kuya ku-7 ntambama.
Amanani: ngezinsuku ezithile intengo ingama-euro angama-14 umuntu omdala ngamunye nama-22 ngamaholide. Amanye amadethi abiza ama-euro ayi-12 kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu nangezimpelasonto ama-euro angama-18 nezinye izinsuku, ama-16 nama-22 euros ngokulandelana. Bheka iwebhusayithi ngalezi zinsuku. Intengo yeSekethe Elishisayo ingama-euro angama-25 phakathi nezinsuku nama-35 ngoMgqibelo nangeSonto. Ama-euro angama-30 kulabo abahlala e-spa.
Kukhona amaphakheji anendawo yokuhlala futhi engenayo indawo yokuhlala. kusuka kuma-euro angama-48 ungajabulela usuku nge-massage yemibhangqwana nokufinyelela kusifunda esishisayo. Ngezindawo zokuhlala kunamaphakeji ezinsuku ezintathu zokuhlala anecebo lokudla kanye nokwelashwa okuhlukahlukene okuvela kuma-euro angama-144 umuntu ngamunye. Ujabulela isaphulelo sika-15% uma uthenga inyanga ngaphambi kwalokho. Inketho eshibhile isuka kuma-euro angama-94 ubusuku obubili efaka imizila yebhayisikili. Futhi kulula, kusuka kuma-euro angama-100 unezinsuku ezine, ukufakwa kokudla nokufinyelela kwamahhala kumachibi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Murcia » I-Archena Spa
Ipaki yemvelo i-Arribes del Duero